Izindaba - Ukufakwa Kwamathuluzi Kawoyela Negesi
Imboni kawoyela negesi isekela umphakathi wanamuhla. Imikhiqizo yayo ihlinzeka ngamandla kumajeneretha kagesi, ezindlini zokushisa, futhi inikeza uphethiloli wezimoto nezindiza ezithwala izimpahla nabantu emhlabeni wonke. Okokusebenza okusetshenziselwa ukukhipha, ukucwenga, kanye nokuthutha lawa manzi namagesi kufanele kumelane nezindawo zokusebenza ezinokhahlo.
Imvelo Eyinselele, Izinto Ezisetshenziswayo Zekhwalithi
Imboni kawoyela negesi isebenzisa uxhaxha lwemishini ekhethekile ukuze ifinyelele izinsiza zemvelo futhi izilethe emakethe. Ukusuka ekukhishweni okhuphuka nomfula ukuya ekusabalaliseni okuphakathi nomfula kanye nokucwengisiswa komfula, imisebenzi eminingi idinga ukugcinwa nokunyakaza kwemidiya yenqubo ngaphansi kwengcindezi kanye namazinga okushisa amangalisayo. Amakhemikhali asetshenziswa kulezi zinqubo angagqwala, awonakalise futhi abe yingozi uma uwathinta.
Izinkampani zikawoyela kanye nozakwethu bochungechunge lokuhlinzeka bangazuza ngokuhlanganisa okokufakwa kwensimbi engagqwali nama-adaptha ezinqubweni zabo. Lo mndeni wama-alloys asekelwe ku-iron uqinile, awukwazi ukugqwala, futhi uhlanzekile. Izici eziqondile zokusebenza ziyahlukahluka ngokwebanga, kodwa izici ezijwayelekile yilezi:
• Nonmagnetic, emabangeni athile
Insimbi engagqwali inokuqukethwe okuphezulu kwe-chromium, ekhiqiza ifilimu ye-oxide engabonakali futhi eziphilisayo ngaphandle kwento ethile. Indawo engenazimbobo ivimba ukungena komswakama, inciphise ukugqwala kwemifantu, nokubhoboza.
I-Hainar Hydraulics ikhiqiza izifakelo zensimbi engagqwali ezijwayelekile nezenziwe ngokwezifiso zokusetshenziswa kukawoyela negesi. Kusukela ekuvikeleni ukugqwala kuya ekuqukatheni izingcindezi ezinkulu, sinomkhiqizo olawula uketshezi ukuhlangabezana nezidingo zakho.
• I-Hose Barb Fittings, noma Izifakelo ze-PushOn
Ukumbiwa nokucwengisiswa kwemithombo yemvelo kuvame ukwenzeka ezindaweni ezikude, ezizwela imvelo, okusho ukuthi ukunqanda kubaluleke kakhulu. Izinsimbi zethu zikawoyela negesi namavalvu agcina uketshezi namagesi ngaphansi kokulawula.
Imikhiqizo yethu ifaneleka kunoma yisiphi isicelo sokucubungula uketshezi lwamafutha negesi. Izibonelo zifaka:
• Imigqa Yezinsimbi
• Amapayipi amanzi
• Ukudlulisa Uketshezi
Izixazululo Zokulawula Uketshezi Ngokwezifiso
Azikho izinqubo ezimbili zikawoyela negesi ezifanayo. Ngenxa yalokho, okokufakwayo nama-adaptha akhiqizwe ngobuningi awahlali elulungele uhlelo lokusebenza. Thola isixazululo esibekiwe sesimo sakho sokulawula uketshezi ngosizo lwe-Hainar Hydraulics.
I-Hainar Hydraulics ingakha imikhiqizo yangokwezifiso ehambisana nezidingo zakho. Umnyango wethu wokwenza izinto zangaphakathi wakhiwe ngomakadebona abakwazi ukwenza lezi zinqubo ezilandelayo:
• Ukulandeleka Ngokwezifiso
Singakwazi ukusika ukuxhumana okunentambo ngokunemba. Ukuhlola ukuqhuma kwepayipi le-onsite kufika kumaphawundi angu-24,000 iyintshi yesikwele kuyatholakala. Isetshenziselwa ukuqinisekisa ukuthi azikho izindlela zokuvuza ezikhona futhi amadivayisi angabamba izingcindezi ezifiswayo.
Imishini kawoyela negesi kufanele isebenze kahle ngesikhathi sokusebenza ngoba noma yiziphi izinkinga ziyiphrofayili ephezulu. Kwa-Hainar Hydraulics, sithatha ikhwalithi ngokungathi sína. Zonke izinto esizenzayo zihlangabezana ne-ISO 9001:2015 izindinganiso zokuqinisekisa ikhwalithi zokufakwa, ukukhiqizwa, kanye nenkonzo. Izinombolo zezingxenye, izinombolo ze-serial, izinombolo zeqoqo, amakhodi okukopela, nanoma iyiphi enye indlela yokulandeleka ingafakwa nge-laser emikhiqizweni.
Izinto ezibonakalayo zitholwa kubahlinzeki abathembekile, futhi ukuthobela kuqinisekiswa lapho ufika. Izisebenzi ezilawula ikhwalithi zisebenzisa izisetshenziswa zokuhlola ezinembayo kanye nokuhlola ukuze ziqinisekise ukuthi yonke imikhiqizo idlula izindinganiso zomkhakha ezisebenzayo noma ukucaciswa kwamakhasimende. Wonke ama-oda acwaningwa ukuze anembile ngaphambi kokuthunyelwa.
Nakuba okuyinhloko esigxile kukho kuwukufakwa kwensimbi engagqwali ye-hydraulic yezinhlelo zokusebenza zemboni kawoyela negesi, singakwazi ukwakha futhi sithumele cishe noma iyiphi idivayisi yokulawula uketshezi. I-inventory ebanzi yensimbi engagqwali iqinisekisa ukuthi sinengxenye oyidingayo esitokweni futhi isilungele ukuthunyelwa. Wonke ama-oda atholwe ngaphambi kuka-3pm Central Standard Time ngomkhumbi ngosuku olufanayo.